बजेटजस्तै मौद्रिक नीति पनि संसोधन हुँदैछ ? यस्तो छ गभर्नरको जवाफ Bizshala -
बजेटजस्तै मौद्रिक नीति पनि संसोधन हुँदैछ ? यस्तो छ गभर्नरको जवाफ
काठमाण्डौ । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत संसोधित बजेट ल्याएसँगै त्यसलाई सपोर्ट गर्ने गरी मौद्रिक नीति पनि संसोधित आउने हो कि भन्ने चर्चा चलिरहेको छ ।
यो चर्चाको विषयलाई नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बजारमा चलिरहेको चर्चाको विषयमा प्रष्ट पार्दै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
अर्थमन्त्रालयमा संसोधित बजेटको विषयमा प्रष्ट पार्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सोधिएको प्रश्नको उत्तर दिंदै गभर्नर अधिकारीले संसोधनसहितको अर्को मौद्रिक नीति नआउने प्रष्ट पारेका हुन् ।
'संसोधित बजेटका प्रावधान, कार्यक्रम र लक्ष्य हेर्दा हामीले प्रस्तुत गरेको मौद्रिक नीति तत्कालै संसोधन गरिहाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छैन ।' उनले भने-'आवश्यक नै परेछ भने पहिलो त्रैमासिक रिभ्यूमा हामी हेर्छौ, तर तत्काल बजेटजस्तै संसोधित मौद्रिक नीति आउँदैन ।'
उनले अघिल्लो सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिइएको र अहिले त्यो संसोधन भई ७ प्रतिशत पुगेको र यो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि आवश्यक नीति तथा तयारीको विषयमा अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए ।
nepal rastra bank mahaprasad adhikari
७ शर्त पूरा नगरे बैंकले बोनस वितरण गर्न नपाउने, बार्गेन गेनबाट
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नगद...
सानिमा बैंकद्वारा १७% बोनस सेयर वितरणको घोषणा
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षको वितरणयोग्य मुनाफाबाट लाभांश घोषणा...
राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा बैंकहरुले घटाउन थाले निक्षेपको
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय...
यसकारण बैंकर उपेन्द्र पौड्यालले पाए 'सुप्रवल जनसेवा श्री'
काठमाण्डौ । संविधान दिवसको अवसरमा विभिन्न क्षेत्रमा योगदान गरेका...
दशैंमा सानिमाको बम्पर योजना: मुद्दतिमा उच्च ब्याज, मासिक
काठमाण्डौ । सानिमा बैंकले दशैंको अवसर पारेर मुद्दति निक्षेपमा पैसा...
काठमाण्डौ । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले व्यक्तिगत...
काठमाण्डौ । यसपटक कुनै पनि बैंकले आफ्ना लगानीकर्तालाई दशैंअघि बोनस...
प्राइमको ब्याजदर डबल डिजीटनजिक, सानिमा पनि आक्रामक
काठमाण्डौ । मुद्दति निक्षेपमा एकाएक १० प्रतिशतभन्दा बढीको ब्याजदर...